त्यसपछि फुलेन गोदावरी कसरी लेख्नु भयो ? कुरो सन् १९९३ तिरको हो । म भारतमा पढथेँ । जुन भेगमा मेरो बसोबास र स्कुल थियो, त्यहाँ कुकी र नागा नाम गरेका दुई आदिवासी जातको बाहुल्य थियो । दुवै ईशाइ, तर एकअर्कालाई फुटेका आँखाले हेर्न नचाहने । हुँदै जाँदा...
उनी हुन् मोडेल स्मिता थापा । मोडेल थापा यौनमा पुरुषको होइन महिलाको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् । नेपाली समाजमा पुरुषहरु महिलालाई यौनेच्छा शान्त पार्ने साधनका रुपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने पुरानो मान्यताका विरुद्ध उनी खरो रुपमा उत्रन चाहन्छिन्...
नारीवादी साहित्य भनेको के हो ? नारीले नारीकैलागी उठाएको आवाज । नारीस्रस्टालाई पुरुषसमकक्षीसम्म पुग्न के ले बाधा पुर्याएको होला ? समकक्षमै छ । समय परिस्थिती,पितृसत्त्तामक सोच र राज्य, हेपाह प्रवृति आदि । नेपालमा नारीवादी साहित्यिक...
साहित्य एउटा कर्म हो पेशा होइन : भुपाल राई
भुपाल राईलाई केवल ५ प्रश्न तपाईको लागी साहित्य के हो? मेरो लागी साहित्य मान्छेद्धारा निर्मत संस्कृती हो । अहिलेको नेपाली साहित्यको समग्र स्थिति कस्तो छ ? अहिले नेपाली साहित्य मुलधार भनिने कथित साहित्य भत्कीरहेको अवस्थामा छ । साहित्य...
पुरातन सामन्तवादी चरित्रको विपक्षमा - प्रकाश गुरागाईँ
उन्मुक्त पुस्ताका अभियन्ता कवि प्रकाश गुरागाईँलाई केवल ५ प्रश्न प्रकाश गुरागाईँ १ । तपाईको लागी साहित्य के हो ? साहित्य समाजको ऐना हो । समाजलाई बाटो निर्देशित गर्ने सामाग्री हो । २। अहिलेको नेपाली साहित्यको समग्र स्थिति कस्तो छ ? अहिलेको नेपाली...